pahilopage – Pahilo Page
दाङ । अखिल (क्रान्तिकारी) दाङको आज सम्पन्न २२औं जिल्ला अधिवेशनबाट कल्याण अधिकारीको अध्यक्षतामा सर्वसम्मतरुपमा नयाँ कार्य समिति चयन भएको छ । क्रान्तिकारीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष दिपेश पुनको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको सम्मेलनले अधिकारीको नेतृत्वमा ७५ सदस्यीय कार्यसमिति चयन गरेको हो । कार्यसमितिको उपाध्यक्षहरुमा गिरबह...
दाङको तुलसीपुरबाट शुरु भयो ‘अग्रिम साप्ताहिक’को प्रकाशन
तुलसीपुर । दाङको तुलसीपुरबाट अग्रिम साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशनमा आएको छ । ‘स्वाधीनता, समृद्धि र समाजवादको यात्रा’ नाराका साथ प्रत्येक सोमबार प्रकाशन हुन लागेको हो । दाङमा छापा सञ्चारमाध्यमको नयाँ शैलीबाट प्रकाशन गर्न लागिएको प्रकाशक दीपक बोहराले बताउनुभयो । मुलुक संघीयतामा गएसँगै पत्रकारिताको पनि फरक अभ्यास गर्न सकिन...
पोखरा । साहित्यकार मालिका केशरीको बौद्ध दर्शनमा आधारित आख्यान “दुङाल”को राजधानीमा विमोचन गरिएको छ । उपन्यासलाई इतिहासकार एवं हिमाली अध्ययनका ज्ञाता डा. रमेश ढुंगेल, मानवअधिकारवादी सुदीप पाठक, पूर्वसचिव एवं साहित्यकार डा. सुधा शर्मा र आख्यानकार मालिका केशरीले संयुक्तरुपमा विमोचन गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा मानवअधिका...
रोल्पा । रोल्पाको सुनछहरी गाउँपालिका १ सेरमको फुलिवन नमुना बस्तीमा पहिरोले २ घर बगाएको छ । दुईवटा घरमा आंशिक क्षति पुराएको इलाका प्रहरी कार्यालय पोवाङका इन्चार्ज सूर्यलाल गुरुङले जानकारी दिनु भएको छ । उहाँका अनुसार ५ घर उच्च जोखिममा रहेका छन् । गएरातिको पहिरोले मानवीय क्षति भने भएको छैन । स्थानीय रणबहादुर घर्तीमगर र...
काठमाडौँ । बहुचर्चित तथा लोकप्रिय नायिका रेखा थापाको आज जन्मदिन परेको छ । मोरङको सलकपुरमा जन्मिएकी निडर स्वभावकी नायिका थापालाई नेपालकी लेडी सिंघमको उपमा पनि दिन थालिएको छ । जन्मदिनको दिनको अवसरमा नायिका थापालाई एकाबिहानैदेखि आफन्तजन, शुभचिन्तक र सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरुले शुभकामना दिइरहेका छन् । सामाजिक सञ्ज...
काठमाडौं । बाह्रखरी बुक्सले “बाह्रखरी कथा प्रतियोगिता २०७८”को तेस्रो संस्करणको घोषणा गरेको छ । प्रतियोगितामा प्रथमलाई १ लाख, द्वितीयलाई ६० हजार र तृतीयलाई ४० हजार पुरस्कार दिइने भएको छ । पुरस्कारको विस्तृत विवरण तल दिइएको छ । डिस होम ‘बाह्रखरी कथा प्रतियोगिता–२०७८’ प्रेस विज्ञप्ति नेपाली आख्यान प्रतिभालाई प्रोत्...
माओवादी नेताहरुलाई कोरोना पो छ कि ?
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्यहरुको कोरोना परीक्षण गरिएको छ । बैठकअघि नेताहरुमा कोरोना भाइरस भए÷नभएको एकिन गर्न त्यस्तो परीक्षण गरिएको हो । बत्तीसपुतलीस्थित अनुपम फुडल्याण्डमा बसेको केन्द्रीय कमिटीकोे बैठक अघि नेताहरुको एन्टिजेन परीक्षण गरिएको हो । परीक्षणका क्रममा रिपोर्ट नेगेट...
गुल्मीमा चोरीको सामानसहित दुई जना पक्राउ
गुल्मी । जिल्लामा चोरीको अभियोगमा दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । धुर्कोट ४ जैसीथोका लक्ष्मी प्रसाद खनालको घरमा चोरी गरेको अभियोगमा रेसुङ्गा ३ भाडगाउँका २२ बर्षीय आशिष विक र धुर्कोट ४ बरबोटका २२ बर्षीय शेरबहादुर विकलाई प्रहरीले शनिवार पक्राउ गरेको हो । गत बुधवार राती खनालको घरमा कोही नभएको अवस्थामा दुबै कोठा ...
पत्रकार महासंघलाई अष्ट्रेलियाबाट आयो ३ लाख
काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले कोरोना सक्रंमित पत्रकारलाई सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले स्थापना गरेको ‘कोराना राहत कोष’ का लागि अष्ट्रेलियाको सिड्नीस्थित अष्ट्राटेक प्रालिका तर्फबाट रु. ३०००००।– (तीन लाख) सहयोग प्राप्त भएको छ । अष्ट्राटेक प्रा.लि.का फाउण्डर तथा एनआरएनए अष्ट्रेलियाका एसीसी सेक्रेटरी(एनएसडब्लु) इ. विनो...